ဦးသန်းနိုင် – ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	185 Views
၁။ အမည် – ဦးသန်းနိုင်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – မွန် / ဗုဒ္ဓဘာသာ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ဘအန(နိုင်)၀၂၇၃၈၂
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၅ . ၁၀ . ၁၉၅၆ (၅၉)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ဘားအံမြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း – ပညာရေးတက္ကသိုလ်(ပထမနှစ်)(၁၉၇၄-၇၅)
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ကုန်သည်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးဘစိန်(ကွယ်လွန်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်နှင်းခြုံ (ကွယ်လွန်)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်စီစီမြင့်၊ ကုန်သည်
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – မိရွှေစင်သစ်၊ ကုန်သည်/ရှေ့နေ မိဖြူစင်သစ်၊ အင်ဂျင်နီယာ မိအေးသန့်စင်၊ ကုန်သည် မောင်ထင်ဘုန်းအောင်၊ ကျောင်းသား
၁၃။ လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာ – ၂/၁၄၇၊ သစ္စာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့၊
၁၄။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ – ၂/၁၄၇၊ သစ္စာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့၊
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီတာ၀န်/ တစ်သီးပုဂ္ဂလ – အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၆။ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် – ဘားအံမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၅-၁၀-၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ဦးဘစိန်၊ ဒေါ်နှင်းခြုံတို့မှ အိမ်အမှတ်(၂/၁၄၇)သစ္စာလမ်း၊ ဘားအံမြို့နေအိမ်တွင် မွေးဖွားသည်။ မွေးချင်း(၂)ယောက်အနက် ဒုတိယသားဖြစ်သည်။
၁၉၆၀-၆၁ ခုနှစ်တွင် ဘားအံမြို့၊ မင်းတန်းရပ်”၀င်းသိပ္ပံ”အလွတ်ပညာသင် ကျောင်း၌ KGB အတန်းစ၍ ပညာသင်ကြားသည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ရဲမူလတန်း (ဘုန်းကြီးကျောင်း)တွင် တတိယတန်း၊ စတုတ္ထတန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ပဉ္စမတန်းမှ ဒသမတန်းအောင်မြင်သည်အထိ အမှတ်(၁)(အထက)ဘားအံမြို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာအထက်တန်း(ခ)ဆင့်၊ ၁၉၇၄ခုနှစ် တွင် (က)ဆင့်ဖြင့် အောင်မြင်သည်။ ၄င်းနှစ် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ရာမညတိုင်းလုံးဆိုင်ရာ မွန်အမျိုးသားအသင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့တွင် ဝိဇ္ဇာဘာသာဘွဲ့ ပထမဆုရရှိခဲ့သည်။
၁၉၇၄-၇၅ ပညာသင်နှစ် ပညာရေးတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တွင် ပညာသင်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ် အလုပ်သမား အရေးအခင်းနှစ်ပတ်လည်သပိတ် (ရွှေတိဂုံအရေးအခင်း)နှင့် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ချမှတ်ခံရသည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ် နို၀င်ဘာလတွင် လွတ်မြောက်ပြီး ၁၉၈၀ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ရက်နေ့တွင် မစီစီမြင့် နှင့် အိမ်ထောင်ကျကာ သမီး(၃)ယောက်၊ သား(၁) ယောက် မွေးဖွားပြီး ယခုတိုင် သစ္စာလမ်းနေအိမ်တွင် နေထိုင်လျှက်ရှိသည်။
၁၉၈၀ ခုနှစ်မှစ၍ မြို့မစျေးကြီးတွင် ကုန်မျိုးစုံဆိုင်၊ ဆေးဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပြီး၊ ၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် သန့်စင်အထူးကုဆေးခန်း၊ သစ္စာလမ်းနေအိမ်၌ ယခုအချိန် အထိ ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ လဆန်းကျေးရွာတွင် ရာဘာခြံဧက(၄၀)စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခဲ့ သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် SNOW DIAMOND Company ထူထောင်ပြီး MD အဖြစ် တာ၀န်ယူလုပ်ကိုင်သည်။ ၂၀၁၅ နှစ်ဦးပိုင်းမှစ၍ HOTEL UNITED (HPA – AN) ကို ၉/၁၈A ၊ အဓိပတိလမ်း၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင် နေပါသည်။